Yintoni ukwenza mhlophe kwilungu lesini? | Amadoda aQinisekileyo
Ngaba uqaphele ukuba ulusu kwindawo yesini lumnyama? Ewe, ukuba ufuna ukugqibelela kule ndawo, ngokuqinisekileyo uvile- kwaye wafuna ukwenza-olu nyango lutsha: mhlophe amalungu esini.
Ukwenza mhlophe kwamalungu esini, njengoko lihamba njalo, lijongana nokutshintsha kombala omnyama wolusu olujikeleze amalungu esini kunye ne-anus.
Le ndawo iba mnyama ngenxa yezinto ezahlukeneyo, ezinje ngeqondo lobushushu, ukusetyenziswa kwempahla yangaphantsi eqinileyo, amadlala okubila, phakathi kwezinye izinto zezona zinto zibangela oko. Nokuba unomkhwa ococekileyo wokucoca, indawo yesini kunye neyokulala iba mnyama ngokuhamba kwexesha, kwaye bobabini abesilisa nabasetyhini bahlala befumana olu nyango ngeenjongo zobuhle.
Ukumiswa kwalo mmandla kusetyenziswa iikhrimu ezinendibaniselwano yeasidi: isalicylic (enesenzo esingaphezulu kwaye esivela kwi-aspirin) kunye ne-glycolic (ingena ngaphakathi kwizicubu ngakumbi, ayisebenzi kwisikhumba esiphakathi, iyakwazi ukonyusa imveliso ye-collagen) ; okanye i-salicylic acid ene-trichloroacetic acid. Kwindawo ezixineneyo, ukusetyenziswa kwezi mveliso kupolisha kwaye kutshise umaleko ongaphezulu kwesikhumba kwaye ithoni emnyama iyanyamalala, iyawa njengokhakhayi kwiintsuku.
Iseshoni iyimfuneko rhoqo kwiintsuku ezilishumi elinesihlanu, iyonke ukusuka kwiseshoni ezine ukuya kwezisibhozo. Emva koko kuya kufuneka usebenzise exfoliator ukususa iiseli ezifileyo kunye nesithambisi.
OKUBALULEKILEYO: Ukuba ufuna ukwandisa ipenisi yakho ngendlela ekhuselekileyo ngoku kunokwenzeka ukukhuphela incwadi ye-Master yencanca ngokunqakraza apha
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Yintoni ukwenza mhlophe kwilungu lesini?
Molweni nonke, eli nqaku belinomdla kakhulu kum kuba ndinengxaki ezithile kuloo nto, umntu apha ekuhlaleni uyazi ngonyango lwasekhaya oluvumela ukuba mhlophe kwamalungu esini, ndilinde iimpendulo, enkosi.
Ewe ndingathanda ukwazi ukuba ukusebenzisa oku akunaziphumo ebezingalindelekanga, kuba olu hlobo lonyango lubonakala lunomdla kakhulu kum, kwaye ukuba kuyinyani ukuba elo lungu lomzimba, njengelungu lesini, limnyama, kulungile , enkosi phuma, unakekele
Phendula ku halio
Thixo wam, ufunda ntoni kumnatha!
Ukudibanisa imibala kwimpahla yamadoda
Iiglasi zikaJohn Richmond